Abu Hurayra R.C. Cabdiraxmaan Ibnu Sakhar Al-doosiyi. Waa saxaabigii waynaa ee soowarinta axaadiista caanka ku ahaa ilaahay raali hakanoqdee.waxa uu dhashay taariikha miilaadigu markii ay ahayd 599 ilaa 676
2 Islaamiddii Abuu Hureyra
3 Sidii uu ugu baari fali jiray hooyadiis oo gaal ahayd
4 Jeceylkii Abuu Hureyra ee Nebiga (scw)
5 Nebiga (scw) ayaa ugu duceeyay cilmiga
6 Faqrigii iyo gaajadii uu la kulmay Abuu hureyra
7 Wuxuu ku tilmaanaa tilmaamo suubban
8 Hal meel ma wada harsanayno anniga iyo kan qaraabadiisa gooya
Islaamiddii Abuu HureyraEdit
Sidii uu ugu baari fali jiray hooyadiis oo gaal ahaydEdit
Jeceylkii Abuu Hureyra ee Nebiga (scw)Edit
Nebiga (scw) ayaa ugu duceeyay cilmigaEdit
Siduu Abuu Hureyra uu naftiisa ula jeclaa barashada cilmiga, ayuu misna ula jeclaa dadka inay weyneeyaan cilmiga. Taasina waxaan ku arki doonaa dhacdadan soo socota. Abuu Hureyra ayaa maalin maalmaha ka mid ah soo maray suuqa magaallada Madiina, wuxuu arkay inay dadkii ku shuqloomeen adduunyo, wuxuu arkay inay ku mashquuleen bicsharada iibka, gadista, siinta iyo qaadashada. In yar ayuu dadkii is dul istaagay, dabadeedna wuxuu dadkii ku yiri: Yaa idinka tabar daran haddaad tihiin reer Madiinoow!!. Waxay yiraahdeen, ma waxaad aragtay kuwanaga tabarta daran Abuu Hureyrow. Wuxuu yiri, waxaa la qaybsanayaa dhaxalkii Nebiga (scw), idinkana waxaad fadhidaan halkan..! War miyeydaan tagaynin oo soo qaadanaynin qaybtiinii!! Waxay yiraahdeen waa halkee?!. Wuxuu yiri: �masjidka�. Dadkii ayaa u deg-deggay masjidka, Abuu Hureyrana iyaga ayuu sugay ilaa ay ka soo laabteen. Markii ay u yimaadeen, ayaa waxay ku yiraahdeen: Abuu Hureyra, waxaynu aadnay masjidkii mana aanan arag wax lagu qaybsanayay masjidka. Wuxuu ku yiri, miyeydan masjidka ku arag wax dad ah?!. Waxay yiraahdeen: haa.., waa run oo waxaynu aragnay dad tukanayay, dad aqrisanayay qur�aanka iyo kuwo kale oo baranayay cilmiga la xidhiidha xalaasha iyo xaaraanta. Wuxuu yiri, haddaba taas ayaa ah dhaxalkii Nebiga (scw) PR umu bariiira
Faqrigii iyo gaajadii uu la kulmay Abuu hureyraEdit
Wuxuu ku tilmaanaa tilmaamo suubbanEdit
Hal meel ma wada harsanayno anniga iyo kan qaraabadiisa gooyaEdit
Markii uu Abuu Hureyra xanuunsaday bukaankii dhimashadiisa ayaa uu ooyay, waxaana lagu yiri maxaad la ooyaysaa?. Wuxuu yiri, lama oynayo cabsida aan ka qabo dunidan tan ah, hase ahaatee waxaan la ooyay safarka dheer ee i sugayo, iyo saadka iyo sahayda yari ee aan wato. Waxaan istaagay dhammeystirka waddo, taasoo ii sii kaxeynaysa Janno ama Naar, mana ogi labadaas meelood meesha aan ku danbeyn doono. Waxaa Abuu Hureyra soo booqday Marwaan Binu Al-Xakam, isagoo ku leh: Abuu Hureyrow Allaha ku shaafiyo. Wuxuu Abuu Hureyra ku Alla baryay ducadan, wuxuuna yiri: �Illaahayow waxaan jeclahay la-kulankaaga ee waxaad adiga jecaataa la kulankayga, iina soo deddeji inaan kula kulmo". Maba uusan Marwan ka bixin gurigii jeer uu ka geeriyoodo Abuu Hureyra. Illaah ha u naxariisto Abu Hureyra raxmad waasic ah, wuxuu ummadda muslimiinta u xafiday wax ka badan kun iyo lix boqol iyo sagaal xaddiis kana mid ah axaadiista Rasuulka (scw), Ilaahay Islaamka iyo Muslimiinta ha uga jazeeyo kheyr, aamiin PR umu bariira
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Hurayra&oldid=206820"
Last edited on 5 Nofeembar 2020, at 11:18
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Nofeembar 2020, marka ee eheed 11:18.